37 ny fandevenana tao anatin’ny telo andro: feno ny fasana kaominaly ao Anjoma Toamasina | NewsMada
Tsy mbola nisy tahaka ity. Maromaro ireo maty any Toamasina amin’izao fotoana izao. Nahatratra 37 ireo fandevenana tao amin’ny fasan’ny kaominina any an-toerana raha ny tao anatin’ny telo andro monja.
Mazava ny fepetra amin’ny tsy fahazoana mitondra razana mivoaka ny faritra Atsinanana aloha, hatreto. Miisa 37 ireo fandevenana natao, nanomboka ny asabotsy sy ny alahadin’ny Pentekosta ary ny alatsinainy teo. Nisy fotoana aza talohan’izao, nahatratra 18 izany tao anatin’ny andro vitsy.
Araka izany, hagagana ny an’ny fokonolona ny alatsinain’ny Pentekosta raha tonga tetsy amin’ny fasana kaominaly fantatry maro amin’ny hoe « Fasam-bazaha Anjoma », raha iny handevina ny razan’ilay mpilalao baolina nalaza fahiny teto Toamasina, i Keta, iny, fa nasaina niandry kely aloha noho ny fahafenoan’ny toerana fametrahana razana. Tsy hoesorina anatin’ny vatam-paty ny azy ireo fa mbola hoentin’ny fianakaviany amin’ny fotoana mahamety azy amin’ny “cavaux”. Mahazaka vatam-paty miisa 18 izany toerana fametrahana razana mbola hoentina izany ary handoavana sarany 25 000 Ar isam-bolana.
Tahotra ny mpitandro filaminana
Vokany, raikitra ny fimenomenonan’ireo fianakaviana ka niampangan’ny maro ny tsy fahaza-miasan’ny mpitantana ny fasana kaominaly. Ny fokonolona rahateo, maika hamonjy fodiana satria efa manakaiky ny ora voafetra ahazoana mivezivezy. Matahotra ny fanelingelenana ataon’ny mpitandro filaminana mpamita iraka koa ny fianakaviana, tsy mitsitsy fa sahy mihitsy mikasi-tanana, araka ny fanazavana teny am-pasana.
Etsy andaniny, efa manomboka tsy hisy toerana handevenana intsony ny ao amin’ny fasana kaominaly Anjoma. Tsy mazoto ny handevina razana ao amin’ny fasana kaominaly any Manangareza Atsimo sy Avaratra koa anefa ny fianakaviana noho ny toerana anaty ala. Fametrahana ireny faty tsy alain’ny fianakaviany ireny amin’izany faritra izany.